iPhone X Mockups | Abadali be-Intanethi
IiMockups ziyindlela eluncedo kakhulu yokujonga umsebenzi woyilo, ngakumbi xa ufuna ukunika umfanekiso onamandla ngakumbi. Kuyacaca ukuba i-mockups nayo iyahluka ngokweendlela kunye nokuqhubela phambili kwetekhnoloji, zonke zinemfuno ngokuxhomekeke kwiimveliso zentengiso. Ngamanye amaxesha kunzima ukufumana itemplate ethile xa ukhangele imodeli ethile. Yiyo loo nto, kwiposti yanamhlanje, senze ukudibanisa enye yeefowuni ezithengiswa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku: i-iPhone X.
Kuyacaca ukuba uyilo lujongeka luluhle ngakumbi nge-mockup esemgangathweni kwaye nangaphezulu ukuba luvela kwi-brand eyaziwa ngokuba yi-Apple. Oku kuya kuphakamisa uyilo lwakho kwelinye inqanaba, onokuthi ungabi nako ukufezekisa ngezinye iimodeli. I-mockups endibelana ngayo ngezantsi, ubukhulu becala zenziwa kwi-photoshop ukuze zihleleke ngokupheleleyo. Abanye bafuna unikezelo kodwa yinto engabiza nto, emva kwayo yonke into ngumsebenzi wabanye abantu. Apha ngezantsi kukho ukhetho lwamaphepha ewebhu kunye nokhetho oluncinci lweemockups ze-iPhone X, kula maphepha.
1 Umhlaba weMockup
1.0.1 Black Iphone X Mockup
1.0.2 Iphone X Mockup Collection
1.0.3 I-Mockup enezithunzi ze-iPhone X
1.0.4 I-iPhone X edadayo iMockup kunye neReflection
2.1 iPhone X Front Mockup
2.2 Ebambe iphone X ngesandla
3.2 Izandla Mockup (iPhone + MacBook Mockups)
Ihlabathi leMockup ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona maphepha alungileyo okukhuphela iimockups ezikumgangatho ophezulu. Kukho iimeko apho kuya kufuneka uthathele ingqalelo iilayisensi, ekubeni ezinye zezomntu kuphela, kodwa oko kuhlala kucacisiwe kwinkcazo ye-mockup. Kwimeko embi kakhulu, kuya kufuneka ubize umbhali kuphela, ukumnika ikhredithi ngomsebenzi wakhe kunye nokukwazi ukusebenzisa i-mockups yakhe.
Le mockup inombono wangaphambili we-iPhone X emnyama. Iqulethe ifayile ye-PSD, enikezelwa kumgangatho ophezulu. Ilinganisa i-4000 x 3000 x px. Kwaye inesisombululo se-300 dpi. Njengokuba iqulethe izinto ezikrelekrele, oko kuyakwenza ukuba kubelula kuwe ukuyihlela. Ungayikhuphela apha eli khonkco.
Iphone X Mockup Collection
Yiphakheji yee-mockups apho i-iPhone X ikwizikhundla ezahlukeneyo. Ifayile nganye yi-3000 x 3000 px, ihleleleka ngokupheleleyo, yakhiwe kwaye ixhotyiswe ngezinto ezikrelekrele. Apha unayo ikhonkco lokukhuphela.
I-Mockup enezithunzi ze-iPhone X
Le mockup yenzelwe unikezelo lwe-app kunye noyilo lwewebhu. Imalunga ne- psd ifayile, umbala ongasemva unokuhlelwa ngokupheleleyo, kunye nento ekrelekrele. Inomlinganiselo we-2362 x 1653 px kunye nesisombululo se-300 dpi.
I-iPhone X edadayo iMockup kunye neReflection
kulo mfanekiso uya kukwazi ukubona ngaphambili nangasemva kwe-iPhone X. Uphawu olumangalisayo lwale mockup kukuba iphone idada emoyeni. Ngomaleko wento ekrelekrele yefayile yePSD uya kukwazi ukutshintsha imifanekiso yangasemva. Inemilinganiselo ye-1723 x 1743 px.
IFreepil yi iwebhusayithi equlathe ngaphezulu kwe-10 yezigidi zemithombo yegraphic, zonke zikumgangatho ophezulu. Unokufumana yonke into ukusuka kwiifoto, imizobo ukuya kwiifayile ezihlelwa ngokupheleleyo zePSD. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kuba ngokuchwetheza nje le nto uyikhangelayo, le njini yokukhangela izakwenza udityaniso lwazo zonke izinto ezihambelana nophendlo lwakho. Ngokuqinisekileyo phakathi kwezixhobo ezingaphezulu kwezigidi ezili-10, uya kuyifumana le nto uyifunayo.
iPhone X Front Mockup
Kule mockup unokubona i-iPhone X kwindawo engaphambili. Ukuba le nto uyikhangelayo a uyilo oluncinci, ngemibala engathathi hlangothi yeyona template ifanelekileyo kuwe. Njengoko besele nditshilo ngaphambili, kukho iitemplates ezifuna ukuchazwa kumbhali. Le yenye yazo, unokuhlawulela iprimiyamu yeFreepik ukunqanda ukuba nombhali, kodwa oko kuya kuxhomekeka kuwe. Ndikushiya wena ikhonkco lokukhuphela.
Ebambe iphone X ngesandla
Njengoko ufundile kwisihloko le mockup ibanjwe ngesandla esinye. Kwizihlandlo ezininzi, ukongeza inxalenye yomzimba womntu kuvelisa imvakalelo yokusondelelana. Zombini umbala ongasemva kunye nemvelaphi yesikrini esiphathwayo zinokuhlelwa ngokupheleleyo. Nantsi into onayo ikhonkco ukuyikhuphela.
I-Dribble yi Uluntu lwe-intanethi lwenyani lwabayili bemizobo. Isebenza njengeqonga lokuziphakamisa kuzo zonke iintlobo zomsebenzi woyilo: uyilo lomzobo, uyilo lwewebhu, umzobo okanye ukufota phakathi kwabanye. Yenziwe ngo-2009 nguDan Cederhol kunye noRich Thornett. Ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kuya kufuneka ubhalise kuphela, ukubhaliswa simahla ngokupheleleyo.
Ukuba ufuna ntoni ngu iPhone X emhlophe mockup, le yeyona nto ifanelekileyo. Yitemplate entle, apho uyilo lwakho luya kuthatha indawo esembindini. Le yile ikhonkco lokukhuphela.
Izandla Mockup (iPhone + MacBook Mockups)
Abadali beli mockup bagqibe ekubeni benze le mockup ngenjongo ezimbini, babefuna ukubonisa ukubonakaliswa kwangempela kwesikhumba. Baye bazama ukubandakanya ubudala, isini kunye nohlobo lomzimba. Singatsho ukuba luqikelelo oluqukayo. le template ikwaqulethe iMacBook mockup.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iphone X Mockups
CSS oopopayi imizekelo
Indlela yokukhetha ifonti yezihloko